Ny firavaka manga eto an-tany - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2019-01 > Ny tany manga manga
Rehefa mijery ny lanitra feno kintana amin'ny alina mazava aho ary miaraka amin'izany dia manome taratra ny faritra manontolo ny volana feno, mieritreritra ny tany mahafinaritra aho izay toy ny firavaka manga eo amin'izao rehetra izao.
Talanjona aho noho ny filaminana sy ny isan’ny kintana sy planeta tsy tambo isaina eto amin’izao rehetra izao, izay toa tsy misy mponina sy tsy misy mponina. Ny masoandro, ny volana ary ny kintana dia tsy manome hazavana fotsiny fa mamaritra ny fotoanantsika ihany koa. Misy 24 ora ny andro iray, misy 365 andro ny taona ary misy fizaran-taona efatra, izay voafaritra amin’ny fitongilan’ny tany (23,5 degre) mankany amin'ny fihodinan'ny masoandro.
Ny Andriamanitsika dia manambara fa Izy no namorona ity planeta ity mba honenana: «Fa izao no lazain’i Jehovah Izay nahary ny lanitra: Izy no Andriamanitra; Izay nanorina sy nanao ny tany - Izy no nanorina azy; Tsy mba ho foana no namoronany azy, fa namboariny honenan’ny olona: Izaho no Jehovah, fa tsy olon-kafa” (Isaia 4.5,18).
Fanomezana avy amin’Andriamanitra Raintsika be fitiavana ny tranontsika sarobidy. Ny zava-drehetra eto an-tany dia natao hamahana antsika, hanohana antsika, ary hitondra fifaliana lehibe ho antsika mandritra ny diantsika mandritra ny fiainana. Inona no tanjon’ireo fitahiana rehetra ireo izay azo inoana fa horaisintsika ho tsinontsinona? Nanoratra toy izao i Solomona Mpanjaka: “Nataon’Andriamanitra ho tsara ho amin’ny fotoany avy ny zavatra rehetra. Namboleny tao am-pon’ny olona ny mandrakizay, nefa tsy hitan’ny olona hatramin’ny voalohany ka hatramin’ny farany ny asan’Andriamanitra. ary aoka ny olona hihinana sy hisotro ary hifaly amin'ny vokatry ny fisasarany, fa fanomezana avy amin'Andriamanitra izany. » (Mpitoriteny) 3,11- iray).
Izany dia mampiseho ny lafiny iray. Nohariana koa anefa isika mba hibanjina an’io fiainana ara-batana io, mihoatra ny zava-mitranga isan’andro, ho amin’ny fiainana tsy misy farany. Fotoana mandrakizay miaraka amin'Andriamanitsika. “Fa izao no lazain’ny Avo sy manerinerina, Izay mitoetra mandrakizay, masina no anarany: Any amin’ny avo sy ao amin’ny fitoerana masina no itoerako ary amin’izay torotoro sy manetry tena, mba hamelombelona ny fanahin’ny manetry tena sy ny fon’ny manetry tena. ny torotoro fo » (Isaia 57,15).
Miaina ao anatin'ny fotoana hikatsahantsika Azy sy hisaorantsika ireo fitahiana rehetra eto sy ankehitriny. Mba hilazana azy hoe ampahany amin'ny natiora indrindra no tiantsika indrindra, tena mankafy ny masoandro isika, riandrano, rahona, hazo, voninkazo, biby ary ny kintana amin'ny alina. Ndao isika hanatona an'i Jesosy, izay mitoetra mandrakizay, ka misaotra Azy fa tsy izy irery no mahery fa izy manokana ihany koa. Na izany aza, izy no maniry ny hizara izao rehetra izao amintsika mandrakizay!
nataon'i Cliff Neill